“Nandositra” Ny Mpandraharaha Ambony Iray Ao Hong Kong. Manontany Ny Mpiserasera Shinoa hoe, Nahoana Kosa Izy No Tsy Tokony Handositra? · Global Voices teny Malagasy
“Nandositra” Ny Mpandraharaha Ambony Iray Ao Hong Kong. Manontany Ny Mpiserasera Shinoa hoe, Nahoana Kosa Izy No Tsy Tokony Handositra?
Voadika ny 25 Septambra 2015 5:00 GMT
Li Ka Shing maka sary miaraka amin'ny filoha Shinoa teo aloha Deng Xiaoping tamin'ny taona 1990. Pikantsary tao amin'ny YouTube.
Namindra tsikelikely ny fandraharahany hiala ao Shina tanibe sy Hong Kong nanomboka tamin'ny taona 2013 ilay olona ambony malaza ao Hong Kong, Li Ka Shing, herintaona taorian'ny nandresen'i Leung Chun-ying an'i Henry Tang, kandidà tohanan'ny sehatry ny fandraharahana tamin'ny fifidianana izay ho filoha mpanatanteraka ny tanàna.
Ny fanapahan-kevitra noraisiny farany dia ny famarotana ny tranobe iray ao Shanghai tamin'ny vidiny 20 miliara yuan (eo amin'ny 3,14 lavitrisa dolara Amerikana eo) ary nanolo-kevitra handray ny renivolany ao amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra ao Hong Kong ny orinasa ivelan'ny morontsiraka ao Cheung Kong, fanapahan-kevitra sokajian'ny Tsanganan'ny Marainan'i Shina Atsimo ho “fizarana farany amin'ny fialàny ao an-tanàna izay efa voaomana tsara.”
Fotoana fohy taorian'ny fanambarana fanovana, dia namoaka lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe , “Aza avela hitsoaka i Li Ka Shing” ny Vondron'Olona mpandini-draharaha mikambana amin'ny governemanta Shinoa, izay nitsikera ireo goavan'ny fandraharahana ao an-tanàna ho mandray tombontsoa avy any Shina kanefa tsy manatanteraka ny adidin'izy ireo ara-tsosialy, tahaka ny sehatry ny fandraharahana mpitari-dalana mihazona ny fahamarinan-toerana ao Hong Kong, manangana fampiantranoana ara-toekarena sy mampiasa vola amin'ny orinasa ara-tsosialy. Na dia nofafana haingana tao amin'ny habaka aza ny lahatsoratra, dia nanjary lohahevitra mafana tao amin'ny media sosialy Shinoa ny “Aza avela handositra i Li Ka Shing” saingy nasiana fanovana. Namerina indray ny fanontaniana ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra, nanontany ny antony tsy tokony handosiran'i Li Ka Shing.
Ny fiforonan'ny ‘sarangan'ny tena mpanankarena’
Nasongadin'ny piesy natao fanivanantena :
Fantatry ny rehetra fa miasa miaraka amin'ny manampahefana akaiky ireo mpandraharahan'ny fanana-mifàka [immobilier]. Rehefa tsy manana fifandraisana ara-politika dia tsy afa-mivelatra eo amin'ny tontolon'ny fanana-mifàka. Izany no mahatonga ny harena ateraky ny fanana-mifàka tsy ho avy amin'ny tsena malalaka. Tsy mety amin'izy ireo ny handao ny firenena araka ny sitrapony […] Amin'ny toekarenan'ny tsena dia mitobina ny mividy mora sy mivarotra lafo. Saingy eo amin'ny fandraharahan'ny fanana-mifàka sy ny seranana, ireo sehatr'asa ireo no tsy misy indrindra eo amin'ny tontolon'ny tsena [ao Shina], ka raha tsy misy ny fanampian'ny manampahefana dia tsy hisy mihitsy ny fanararaotra. Mindram-pahefana amin'ny anaran'ny fiarahamiasa ianao. Fa rehefa mivarotra azy ianao dia miresaka tsena izay. Mandray roa izany ary tsy azo ekena.
Nanome tsiny bebe kokoa ny hevitra “olon'i Hong Kong no mitondra an'i Hong Kong” ny lahatsoratra avy eo, nampidirina tao ny Fanambarana niarahan'ny Shinoa sy ny Britanika izay nanambaran'i Angletera fa hanolotra an'i Hong Kong zanataniny teo aloha amin'i Shina tamin'ny taona 1997, ho miteraka ny sarangan'ny mpanankarembe:
Fianakaviana efapolo ao Hong Kong no mitàna ny roa am-pahatelon'ny harena ao an-tanàna. Mampivarahontsana ny tahan'ny fitobian-karena. […] Niteraka sarangan'ny mpanankarembe ny “olon'i Hong Kong no mitondra an'i Hong Kong” ary niharihary kokoa izany lamaody izany taorian'ny fitambarana indray tamin'i Shina. […] Ny vahaolana tokana dia ny fahazoana ny fanohanan'ny olona amin'ny fanavaozana […] Tokony hodinihan'ny governamanta foibe ny toe-draharaha ary hialàna ny sarangan'ny mpanankarembe, foanana ny fahefan'izy ireo ary omena ny olo-tsotra ny tombotsoa. Raha jerena ara-politika, tokony hampitoviana tantana ny fiarahamonina, ary raha tenenina ara-toekarena dia tokony ahitana karazan-toekarena ao an-tanàna ary sorohina ny ampihimamban'ny indostria tokana.
Tsy vao voalohany ny gazetim-panjakana Shinoa no nitsikera an'i Li Ka Shing. Tamin'ny fiandohan'ny volana Janoary, namoaka lahatsoratra mandrisika ny vahoaka mba tsy hatahotra ny fikasan'i Li hanaisotra ny fampiasam-bola ao Shina ny Global Times.
Amin'ny maha mpitarika ambony eo amin'ny sehatry ny fandraharahana azy, dia olona manana ny maha-izy azy tao amin'ny Mandan'Asa Tafaray an'ny Antoko Komonista Shinoa i Li ary manana fifandraisana betsaka manokana amin'ireo mpitarika ao amin'ny antoko, anisan'izany i Deng Xiaoping efa maty, injenieran'ny fanavaozana ara-toekarena liberaly ao Shina. Midika ho fanovana ny politikam-panjakana ao Hong Kong ny tsikera misokatra mahazo an'i Li
‘Nandray fanapahan-kevitra tsara i Li’
Na dia marina aza ny voalazan'ny lahatsoratra amin'ny filazana ny olan'ny hantsana ara-toe-karena ao Hong Kong ary hita ny fiaviany avy amin'ny firaisana tsikombakomban'ny governemanta sy ny mpandraharaha, dia maro ireo nahita ny baiko “manafoana ny mpanankarena, mividy ny fanohanan'ny olo-tsotra, manamafy ny fahefan'ny antokom-panjakana” (打压富豪，收买底层，扩大政权根基) ho fampahatsiahivana ny hetsika adin-tsaranga nandritra ny Hetsika miady amin'ny helatra ankavanana sy ny Revolisiona Ara-kolontsaina.
Amin'ny lohatenim-baovao ao amin'ny Weibo, mitovy amin'ny Twitter ao Shina, tsy nankasitraka ny lahatsoratry Mpandini-draharaha ny ankamaroan'ny mpiserasera Shinoa. Ireto ambany ireto ny dikan'ireo fanehoan-kevitra miavaka sasany nofantenana tao amin'ny randram-baovao:
Ny ganagana no biby voalohany mahatsiaro maripàna mangatsiaka ao an-drenirano amin'ny ririnina. Ny fivadibadihan'ny firehan-kevitra, tsy fahombiazan'ny fanavaozana ara-pifidianana ao Hong Kong. Mahatsiaro sahiran-kevitra amin'izany rehetra izany Andriamatoa Li ary tsy maintsy nandeha
Raha tsy mandao an'i [Shina] izy, hongiazan'ny komonista ny volany…
Ao anatin'ny roa taona, hitsoaka ihany koa i Jack Ma [mpanorina ny Alibaba, sehatra ara-barotra antserasera goavana indrindra ao Shina]
Nankaiza ny fitsipi-dalàna? Raha nahavita fandosiran-ketra na kolikoly i Li tamin'ny fandraharahana nataony tao Shina, ampiasao ny lalàna. Toa tsy sahy mamoaka [ny antsipirahan'ny kolikoly vitan’] ireo rahalahy goavana mifandray amin'i Li ianao, kanefa kivy koa amin'ny fandosiran'i Li miaraka amin'ny vola betsaka azony. Tahaka ny hanihany ny mandre teny faneva ara-politika.
Mampiseho ny fijery ofisialy ity lahatsoratra ity. Amin'ny famakiana azy, nandray fanapaha-kevitra tsara i Li mba hitsoaka. Maro ihany koa no tokony handositra.